Ihe Ndị Na-eme n’Ụwa—Akụkọ Gbasara Afrịka | Teta!, Mee–Jun 2015
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luvale Macedonian Malagasy Myanmar Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Òtù dị iche iche na ụfọdụ ndị na-agbalịsi ike ka ihe isi ike kwụsị n’Afrịka. Ma, ihe na-ebenụ ka na-ebe.
A na-akpọ anụmanụ ndị a e sere ebe a raịno. Na Saụt Afrịka, a machiri ndị mmadụ igbu raịno. Ma, ndị mmadụ ka na-egbu ya. Dị ka ihe atụ, n’afọ 2007, e gburu naanị raịno iri na atọ. Ma n’afọ 2013, e gburu otu puku raịno na anọ. Ihe ha ji egbu ya bụ maka na ha na-ere mpi ya ere. N’agbanyeghị na mpi ya juru eju n’ebe a na-ere ya, ọ na-ada ọnụ karịa ọlaedo n’ihi na ọtụtụ ndị na-achọ ịzụ ya. Otu mpi ya na-adarucha ihe dị ka iri nde naịra asaa na asatọ, narị puku itoolu na iri puku ise.
IHE A GA-ECHEBARA ECHICHE: Ndị ọchịchị hà ga-emeli ka ụmụ mmadụ kwụsị imebi iwu?—Jeremaya 10:23.
Ịna Aka Azụ
E nwere òtù na-ahụ na ndị mmadụ na-akwụwa aka ọtọ n’ụwa niile. Òtù a kwuru na mba ndị nọ n’Ebe Ọwụwa Anyanwụ Afrịka kacha ana aka azụ n’ụwa niile. Ma, ọtụtụ ndị a naara aka azụ ma ọ bụ ndị hụrụ ebe a na-anara ya, na-agba nkịtị. Ọnụ na-ekwuchitere òtù a na Kenya kwuru, sị: “Obi anaghị aka ndị mmadụ na ndị ọchịchị ga-eme ihe ọ bụla ma a gwa ha gbasara ndị nara aka azụ.”
IHE BAỊBỤL KWURU: “Ngarị na-ekpuchi ndị na-ahụ ụzọ nke ọma anya.”—Ọpụpụ 23:8.
Ndị afrịka na Ịntanet
Ụlọ ọrụ na-ahụ maka Ịntanet n’ụwa niile kwuru na e kee ndị Afrịka ụzọ otu narị, a na-atụ anya na tupu afọ 2014 agwụ, ihe dị ka ụzọ iri abụọ n’ime ha ga na-aga n’Ịntanet. N’Afrịka, ndị ji ekwentị ma ọ bụ ihe ndị yiri ya aga n’Ịntanet ka ndị na-aga n’Ịntanet n’ụwa niile okpukpu abụọ.